Uyenza njani ikhava engaphambili kunye nangasemva kwincwadi yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyenza njani ikhava yangaphambili kunye nomva yencwadi yakho
Ukuba ufike kule ndawo, inokuba kungunobangela wezizathu ezibini: kuba ungumbhali kwaye ufuna njalo Yila iqweqwe lencwadi ubhale nje; okanye ngenxa yokuba uceliwe njengomyili weqweqwe lencwadi kwaye awazi ngenene ukuba ungayicwangcisa njani le projekthi.
Nokuba yeyiphi na, le nkqubo ilula, kodwa kukho izinto ezithile ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuthintela ukuwela kwiimpazamo okanye ukusilela okuthi, kamva, xa kuprintwa iincwadi, luyilo (kunye nexesha) elichithwe. Ngaba ufuna ukuba sikuxelele ngayo?
1 Isimbozo sencwadi
2 Idatha ebalulekileyo yekhava yencwadi kunye nekhava yangemva
3 Yila iqweqwe elingaphambili nelingasemva kwincwadi yakho
3.1 Yenza isiciko esingaphambili nesangasemva ngokwahlukeneyo
3.2 Sebenzisa iinkqubo ezifanelekileyo
3.3 Gcina iliso kwimilinganiselo
3.4 Imifanekiso kunye neefonti ezihambelana nencwadi
Isikhuselo sencwadi mhlawumbi sesinye sezona ndawo zibaluleke kakhulu phaya. Gcina ukhumbula ukuba abafundi abahlali bayeke ukubona zonke iincwadi kwivenkile yeencwadi, kodwa bajonge kuphela ezo zibamba umdla wabo. Kwaye kulapho isiciko singena khona.
Lo Kuya kufuneka inomdla ngokwaneleyo ukuba umntu, xa eyibona, angakwazi ukunceda kodwa ayithathe incwadi kwaye uyihlalutye ngokusondeleyo. Ngamanye amagama, ikhava yencwadi luphawu lokuqala oza kuyenza kumfundi.
Ke ngoko, kubalulekile ukuhlawula a lot of ingqalelo iinkcukacha ukufumana iseti eyamkelekileyo. Kwaye kufuneka ibonakaliswe ngu:
Nxulumana nencwadi ngaphakathi: ngekhe ubeke isiciko sekati ukuba ibali lakho limalunga nezinja.
Cacisa kwaye uqondakale ngokwaneleyo: ukuba ubeka ibala elimnyama kwimvelaphi emhlophe, abantu abazukuyazi ukuba incwadi yakho ibhekisa phi, loluphi uhlobo loncwadi olunokubakho, kwaye baya kulitsiba.
Unayo yonke idatha yekhava yencwadi: kwaye yeyiphi idatha? Siza kwenza izimvo ngayo apha ngezantsi.
Idatha ebalulekileyo yekhava yencwadi kunye nekhava yangemva
Zombini iziciko kunye neqweqwe elingasemva lencwadi yakho mazibe nolwazi eziphindaphindwayo kuzo zonke iincwadi, kwaye ukungahoyi kunokuba yingozi (kuba ukwahluka, banokuba madolw 'anzima ukuyithenga).
Kwimeko yekhava, idatha ekufuneka ukuba inayo: ligama lombhali kunye nesihloko sencwadi. Akusekho nto. Baninzi ababeka izihlokwana okanye amabinzana ebalini, kodwa ufuna la macandelo mabini olwazi.
Igama lombhali kungenxa yokuba kuya kufuneka uchaze ukuba ngubani oyibhalileyo (ngubani umntu osemva kwelo bali) kunye nesihloko ukuze ukwazi ukugxila kuye nabani na oyibonayo kuhlobo oluquka loo ncwadi.
Ungathini ukuba sisiqweqwe esingasemva? Nantsi inkululeko engakumbi, kodwa ngokubanzi iqulethe: isishwankathelo sebali, ibhakhowudi ene-ISBN yencwadi leyo, kwaye ngokuzikhethela, ngobomi bomlobi.
Isishwankathelo sencwadi kubalulekile, iya kuba sisishwankathelo sebali elibaliweyo kuyo, nokuba yintsomi okanye yinyani. Ukongeza, ikhowudi ye-ISBN (emelwe yibhakhowudi) ibalulekile ukuze ukwazi ukuzithengisa ngokwazo iincwadi.
Okokugqibela, i-biografi yombhali, le yinto onokukhetha kuyo. Kukho abo bathatha isigqibo sokuyibeka kwaye basebenzise elinye lamaphepha angaphakathi ukuyenza.
Yila iqweqwe elingaphambili nelingasemva kwincwadi yakho
Ngoku ukuba sikuxelele ngokubaluleka kwamaqweqwe angaphambili nangasemva kwincwadi yakho, kunye nedatha ekufuneka uyibandakanyile nganye yazo, lixesha lokuba uqale uyile. Kodwa ukwenza njani?
Yenza isiciko esingaphambili nesangasemva ngokwahlukeneyo
Sicebisa ukuba uyenze ngokwahlukeneyo. Oko kukuthi, wenza ifayile yemifanekiso esisiciko kwaye enye sisiciko esingasemva.
Kungenxa yokuba, ukuba uza kuyilayisha ngokwamanani, awuzukufuna ikhava yangasemva, kodwa kuya kufuneka ubeke isiciko sencwadi. Ukuba unomfanekiso omnye kunye nazo zombini, awuyi kujongeka ulungile kwaye uya kunika umfanekiso ombi.
Sebenzisa iinkqubo ezifanelekileyo
Los Iinkqubo ekufuneka uzisebenzisile ukwenza njalo ziinkqubo zokuhlela imifanekiso kuba kuyakufuneka udibanise, udibanise kwaye uphinde ubambe umfanekiso kunye nesicatshulwa (segama lombhali kunye nesihloko) ukuze yonke into yenziwe ifreyimu kwaye iprintwe esemgangathweni. Ukuba uyenza ngenkqubo engeyiyo eyokuhlela imifanekiso, umgangatho "uya" kuncitshiswa "kwaye xa kufikwa kushicilelo aluyi kuvela kakuhle.
Ukuba awulunganga kuyo, kungcono ukuqesha ingcali. Sithetha ngesihloko esihle kakhulu esinokonakalisa ukuthengisa kwakho incwadi, kwaye ngekhe udlale ngaso. Kodwa ukuba uyingcali, okanye ulungile kuyo, yiya phambili.
Gcina iliso kwimilinganiselo
Sicebisa ukuba, xa usenza isiciko esingaphambili nesingasemva, uyenze ngokusekwe kubungakanani ekufuneka ubuzalisileOko kukuthi, umphambili, umqolo kunye nesembozo esingasemva. Kwi-Intanethi ungayifumana itemplate yoku ngokusekwe kubungakanani bencwadi yakho, nokuba ineziciko okanye hayi. Unokuzikhokela ngazo kwaye wahlule icandelo ngalinye. Ukongeza, imifanekiso kufuneka ifumaneke ngowona mgangatho uphezulu kunye nobungakanani. Kungcono ukusebenzisa ezikhulu kwaye uzenze zincinci kunenye indlela ejikelezileyo, eneepikseli.
Imifanekiso kunye neefonti ezihambelana nencwadi
Soloko uzama ukukhetha imifanekiso kunye neentlobo zeefonti ezingqinelanayo nohlobo lwencwadi leyo. Kwaye, ukuba kunokwenzeka, banento yokwenza nebali; ukusukela ngale ndlela umntu oyibonayo uya kuba nakho ukwazi ukuba imalunga nokujonga nje emfanekisweni.
Ewe, zama ukungagcwalisi ngaphezulu ikhava. Iingcali zicebisa ukuba kungabikho ngaphezulu kweendidi ezintathu zemigca exutywe phakathi kwezikhuselo zangaphambili nezingasemva, kwaye umzekeliso okanye umfanekiso wekhava awunambaliso kuba unganika ukwaliwa (okanye uziva ngathi sisiphithiphithi kwaye ngekhe uyiqonde incwadi ). Ngamanye amaxesha kuncinci kuninzi kwezi meko.
Ngokubanzi, xa uyila isiciko sencwadi kunye nesembozo esingasemva, into emele ukufika kuqala kukuyila kunye nokubonwayo. Kuxhomekeke kuhlobo olo, kuya kufuneka ukhethe uhlobo olunye lwekhava okanye enye, kwaye oko kuya kwenza ukuba ufumane ukutolikwa okwahlukileyo. Ingcebiso yethu kukuba wenze izembozo ezininzi kwaye uzivavanye. Ke unokwazi ukuba leliphi elona lichanekileyo kwibali lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani ikhava yangaphambili kunye nomva yencwadi yakho
Ungawasusa njani amaphepha kwiPDF ngezi zixhobo zasimahla